Godina Wallaggaa Anaallee NaaJjoo, Jaarsoo fi Baaboo Gambeel irraa ibsan erga badee guyyootaa 4 dabarsee jiraachuu Qeerroon Gabaase. « QEERROO
Godina Wallaggaa Anaallee NaaJjoo, Jaarsoo fi Baaboo Gambeel irraa ibsan erga badee guyyootaa 4 dabarsee jiraachuu Qeerroon Gabaase.
May 29, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Caamsaa 29,2017/ Godina Wallaggaa Anaallee NaaJjoo, Jaarsoo fi Baaboo Gambeel irraa ibsan erga badee guyyootaa 4 dabarsee jira. Uummannii anaallee kaneennii hedduu rakkacha kan jiran yoo motummaan afaaniin misoomaa labbsuu bishaan Oromiyaa keessa ba’uun illee uummataa isa Ibsa ga’a ta’ee kennefi gargara hin jiru haati Iyyeessaa anallee kaneennii miidhaan nyaatan ilee bakka itti dakkataan dhabbanii rakkinnaa guddaa keessa jiru.
« Qophiilee Diinqa Oromoo
Koloneeffataan TPLF Godina Wallagga Aanaa Waayyuu Xuqaa fi naannoo ishee irraa xaa’oo kutuudhaan uummata naannichaa rakkoo beelaaf saaxilaa akka jiru himame. »